Thursday September 26, 2019 - 09:33:37 in Wararka by Super Admin
Tafaasiil dheeraad ah ayaa kasoo baxaysa weerar xooggan oo ciidamada Al Shabaab ay xalay ka fuliyeen gudaha magaalada Jowhar ee xarunta Sh/dhexe.
Wararka ka imaanaya degmada Jowhar ayaa sheegaya in ciidamo aad u hubeysan oo katirsan Al Shabaab ay xalay fiidkii gudaha ugaleen magaalada waxayna weerareen goob isku imaatin ah oo ay ku sugnaayeen ciidamo katirsan maamulka 'Hirshabelle' gaar ahaan kuwa Booliska.
Xoogaga weerarka fuliyay ayaa ku roondeeyay xaafadda Hantiwadaag ee dhacda galbeedka magaalada Jowhar halkaas oo ay ku dileen ugu yaraan 2 askari oo katirsan ciidamada Booliska.
"Mujaahidiinta ayaa xalay howlgal qorshaysan ka fuliyay gudaha magaalada Jowhar gaar ahaan xaafadda Hantiwadaag, weerarka waxaa lagu dilay 2 askari oo katirsanaa ciidamada murtadiinta hubna waa lagasoo qaniimeystay" ayaa lagu yiri war kooban oo kasoo baxay taliska ciidanka Al Shabaab.
Wararka ayaa intaas ku daraya in weerarka uu ku dhaawacmay askari kale islamarkaana xoogaga Al Shabaab ay horay usii qaateen sedax qori AK47 ah iyo booshahkooda.
Dadka deegaanka ayaa sheegay in ciidamada Al Shabaab ay si nabad gelya leh dib uga gurteen magaalada Jowhar iyagoo nabad qaba mana jirin wax dabagal ah oo ay kala kulmeen ciidamada AMISOM iyo maleeshiyaadka maamulka isku magacaabay Hirshabelle.